09 | November | 2019 | Danya Wadi
By danyawadi November 9, 2019 Leaveacomment
Submitted by moderator on Tue, 06/17/2014 – 08:52 Attached is Derek Tonkin’s discussion about Francis Buchanan-Hamilton’s work in 1799, which many pro-Rohingya activists citing as an evidence for the existence of historic-Rohingya ( i.e. Rohingya ethnic or tribal group ). He makes important point of interpreting F B-H document carefully against existing British census […]
မြန်မာ့ သမိုင်း စာအုပ်များ တက္ကသိုလ်စိန်တင် အိုဘယ့် အနော်ရထာ http://www.mediafire.com/?tbjvt1xw7wp6du7 တက္ကသိုလ်စိန်တင် မင်းတုန်းမင်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ http://www.mediafire.com/?3mzpz36dtda9lqz မြသန်းတင့် ဧကရီဖွားစော http://www.mediafire.com/file/9vvtfk85diiqhri/ တက္ကသိုလ်စိန်တင် ၁၉၄၅ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း http://www.mediafire.com/?1y75jvx7jcb9c63 တက္ကသိုလ်စိန်တင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၁ http://www.mediafire.com/?2y0baijuh4lwwhl ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၂ http://www.mediafire.com/?41cyj328ij0mrnz ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၃ http://www.mediafire.com/?aagkbtzijt0woxf ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၄ http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5 မင်းကျန်စစ်ကို ချစ်တဲ့သူများ – ဒေါက်တာမတင်ဝင်း http://www.mediafire.com/?k9qamife76zrvj9 ချစ်စိန်လွင် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆောင်ကြာမြိုင် မှတ်တမ်း http://www.mediafire.com/?jtewp5s117iz0oy9 တင်နိုင်တိုး ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ရုပ်ပုံလွှာ http://www.solidfiles.com/d/bc932b5c36 တင်နိုင်တိုး-ကုန်းဘောင်ခေတ်မင်းမှုထမ်းများအဘိဓါန် http://www.mediafire.com/file/ispwsc0yf8w14ae/ တင်နိုင်တိုး နိုင်ငံတော် သမ္မတများ(၁၉၄၈ – ၁၉၈၈) http://www.mediafire.com/file/521fsqe8hklh09u/ တင်နိုင်တိုး […]